Golaha Shacabka oo ka shaqeynaya in Miisaaniyadda 2019-ka ay daboosho baahiyo fara badan – Kalfadhi
Golaha Shacabka ayaa gacanta ku haya dib u habeynta Miisaaniyadda 2019-ka. Hase ahaatee, markii 18-kii bishan ay Wasaaradda Maaliyaddu u soo gudbisay Golaha, waxay xildhibaano dhawr ah ka dhawaajiyeen iney tahay wax laga walaaco hadeysan miisaaniyaddan waxba u qoondeyn ama u kordhin hay’ado, xildhibaano hore, dowlad goboleedyada qaar iyo shaqaalaha cusub ee dowladda.
Lama hubo waxa ay Guddiga Maaliyadda ee Golaha Shacabku ka yeeli doonaan, balse waxa uu Guddoomiye Kuxigeenka Golaha Shacabka, Mahad Cabdalla Cawad, faray iney Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed (JUS) miisaaniyadda u kordhiyaan.
“Yaa leh Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed? Intii ay maamulka jaamacaddu soo wadi kareen waa soo wadeen, dhqaale in loo huraa loo baahan yahay. Guddiga Maaliyadda iyo Guddiga Arrimaha Bulshada, arrinkaas hakala shaqeeyaan jaamacadda, wixii hara inagaa jeebkeena ka aruurineyna” ayuu yiri Guddoomiye Cawad.
Markaas waxa uu Cawad ka jawaabayey in sanadkii 2013-ka lacag gaareysay 5 milyan oo Doolar, oo ay jaamacaddu u dalbatay miisaanyad ahaan, laga helay 3.5 milyan oo Doolar oo kaliya. Sida uu sheegay Guddoomiyaha JUS, Prof. Maxamed Axmed Jimcaale, muddo 3 sano ah oo ay jaamacaddu shaqeeneysay, wax miisaaniyada looma kordhin, shalay ayuuna Golaha ka codsaday in miisaaniyadda loo gaarsiiyo 5 milyan oo Doolar.
Sida uu ku dooday Xildhibaan Cabdirashiid Xidig, waxa uu Guddiga Maaliyadda ee Golaha kula dardaarmayaa iney si fiican ugu hubiyaan Miisaaniyadda 2019-ka in ay ku jirto in ciidanka loo kordhiyey mushaarka. “Guddigu waa iney hubiyaan go’aamadii horay loo gaaray iyo waxa miisaaniyad ahaan ugu jira ciidamada miisaaniyaddaan” ayuu yiri Xildhibaan Xidig.
Xidig waxa uu sidoo kale adkeynayaa in ay miisaaniyadda xildhibaanadii hore ku jirto Miisaaniyadda 2019-ka, “mar haddii” buu yiri “marar badan horay looga hadlay”. Isaga oo doonaya inuu muujiyo heerka dhibaatada shaqa la’aanta ee dalka ayuu yiri “dadka Soomaaliyeed shaqo la’aan ayey u dhimanayaan”.
Sida ay Wasaaradda Maaliyaddu horay u sheegtay, waxa ay Miisaaniyadda 2019-ka ee Dowladda gaareysaa 340 milyan oo Doolar, halka tii 2018-ka ay ka ahayd 274 milyan oo Doolar, waxaana ay taas muujineysaa in Miisaaniyadda 2019-ka ay ku korortay 66 milyan oo Doolar. Sidaas oo ay tahay, waxay xildhibaano badan qabaan walaac ah in baahiyaha jira ay ka xajmi iyo culeys weyn yihiin miisaaniyadda sanadka soo socda, oo ay rajo ka qabeen iney wax badan ka bedelnaan doonto miisaaniyadda sanadkan sii dhamaanaya.